प्रा.डा. संग्रौलाको विश्लेषणः आगामी निर्वाचनमा एक वाम पार्टी र राप्रपाबीच मोर्चा, बीजेपीले बोक्ने !
प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले आगामी निर्वाचनमा एउटा वामपन्थी शक्ति र राप्रपाबीच मोर्चा बन्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
राजालाई राष्ट्रप्रमुख बनाएर निर्वाचन लड्ने अर्को गठबन्धन बन्ने उनको विश्लेषण छ ।
आइतवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा सन्देश लेख्दै संग्रौलाले एउटा वामपन्थी शक्ति र राप्रपाबीच मोर्चा बन्ने र त्यसलाई भारतको बीजेपीले बोक्ने विश्लेषण गरेका हुन् ।
बीजेपीका कतिपय नेताहरू नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्दै हिँड्ने गरेको पाइन्छ ।
संग्रौलाले नेपाल नियन्त्रित अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने खतरा रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
हेर्नुहोस्, उनको स्टाटसः
अब राजनीतिमा तीन लहरको शुभारम्भ हुनेछ । राजालाई राष्ट्रप्रमुख बानाएर निर्वाचन लड्ने एक गठबन्धन बन्नेछ । यसमा एउटा वामपन्थी शक्ति र राप्रपाको मोर्चा बन्नेछ । यसलाई भारतको बीजेपीले बोक्ने छ ।
अरू वामपन्थीहरू केहीलाई छाडेर वाममोर्चामा आउने छन् । उसलाई पनि बीजेपीले प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउने छ, त्वम शरण गर्ने कारणले यो मोर्चालाई जोगाउन सक्लान तिन्ले? शंका लाग्छ । राजतन्त्रको मोर्चामा जाने वामपन्थीले आफूलाई ध्वस्त पार्न लामो समय लाग्ने छैन । कांग्रेसलाई अमेरिकी सहयोग बढ्ने छ । नेपाल नियन्त्रित अस्थिरता को भूमरीमामा झन् ज्यादा डुब्ने छ ।
तर अब बौद्धिक विकल्प तीव्र गतिले बढ्ने छ । नेपाली युवा समाजवादको पक्षमा उभिने छन् । यो अन्तिम संक्रमणको युग १० वर्षको हुनेछ, तब मात्र देश विकासको ढाँचा लिएर अगाडि बढ्ने छ ।
युवाहरू निराश नहोऊ, अब देश तिम्रो हातमा आउने छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनले गठबन्धन कमजोर हुने र एमाले बलियो हुने संकेत मिल्योः एमाले महासचिव
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्राप्त नतिजाले एमाले बलियो र सत्ता गठबन्धन कमजोर बन्ने संकेत मिलेको दावी गरेका छन् । ‘अब हुने सबै निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने भएकोले गठबन्धन कमजोर हुने र ने...
कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एस)को शत् प्रतिशत जीत, जसपालाई १ सीट घाटा
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले प्रदेश १ बाहेक अन्यत्र सबैतिर अपेक्षित नतिजा हात पारेको छ । बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका सबै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेश १ मा...